Algolia: Fikarohana Realtime anatiny ho serivisy | Martech Zone
Algolia: Fikarohana Realtime anatiny ho serivisy
Alatsinainy 17 Febroary 2014 Douglas Karr
Ny fananganana ny fahaizanao mitady ao anatiny izay manankarena, tena izy ary tena haingana dia tetikasa iray. Manampia fikarohana geografika, sary, varotra ary finday ary mampivelatra sehatra iray manontolo ianao amin'ny ankapobeny. Vao niresaka tamin'ny mpanamboatra iray izahay androany maraina momba ny fahaizan'izy ireo mikaroka ary mila ambara kokoa ao amin'ny tranonkalany ilay singa.
Tsy mila mampivelatra ny anao - Algolia dia serivisy fikarohana feno fampiantranoana, azo alaina ho toy ny REST API. API Ny mpanjifa dia misy amin'ny drafitra lehibe rehetra, sehatra sy fiteny ary fampitana data eo amin'ny mpanjifa sy ny API dia amin'ny endrika JSON.
endri-javatra ny Algolia
High-Performance - ny fotoana famaliana hatramin'ny 200 heny haingana noho Elasticsearch, ary hatramin'ny 20,000 heny haingana noho ny SQLite FTS4. Ny fanondroana anarana dia tsy mifanaraka raha afaka mitady data vaovao segondra ny mpampiasa aorian'ny fanavaozana. Mampiharihary an API amin'ny fanamarinana ny mari-panondroana.
Nginx - Ny fampiharana ny mpizara Algolia dia voasoratra tanteraka ao amin'ny C ++ ary natsofoka ho modely ao anatin'ny lozisialy HTTP Nginx mahomby be.
Dashboard - Fandraisana an-tsary iray ho an'ny asa rehetra, ao anatin'izany ny fampiasana, ny fahombiazany, ny fametrahana azy, API hazo, API lakile sy fizahana data.
Fikarohana data - natao hitady firaketana fa tsy pejy
Vahaolana tonga lafatra ho an'ny tahiry SQL sy NoSQL, miaraka amina algorithm milahatra mangarahara namboarina ho angon-drakitra semi-strukture.
Multi-toetra - manaiky karazana zavatra sy toetra isan-karazany hikarohana.
Mikaroha rehefa manoratra - mihoatra ny famitana automatique tsotra, ny mpampiasa dia mahazo valiny fikarohana nohavaozina isaky ny litera soratany.
Relevance - laharana namboarina sy namboarina tanteraka. Algolia manome ny fomba mora indrindra handaminana ny valiny amin'ny lazany ary sady hitazomana ny maha-zava-dehibe azy.
Mobile - natao ho an'ny finday… haingana, mamela ny helony ary soraty ny valiny amin'ny halaviran-toerana geo.
Linguistics - Karohy amin'ny fiteny voasoratra rehetra. Ohatra, ny fikarohana amin'ny alàlan'ny sinoa notsorina dia mety hahita fitsapana amin'ny teny sinoa nentim-paharazana.
Fanitsiana typo - Algolia mahatakatra ny typos, na dia amin'ireo litera vitsivitsy voalohany aza, ka mbola afaka mahita izay tadiaviny ny mpampiasa anao.
Fanasongadinana an-tsaina - Asongadino izay fizarana mifanaraka amin'ny fangatahan'ny mpampiasa, na dia litera vitsivitsy voalohany amin'ny teny fotsiny aza ilay faritra ary misy typo.
Fomba fiasa amin'ny fotoana tena izy - ny motera fikarohana tokana manome soso-kevitra arakaraka ny fanoratanao, ka mahazo valiny amin'ny endriny ny mpampiasa aorian'ny fanalahidy voalohany.
Geo-karohy - asehoy amin'ny alàlan'ny halavirana ny fitsapana, na ireo eo akaiky eo ihany, na amin'ny faritra iray manokana. Atambaro amin'ny fangatahana lahatsoratra sy ny endri-pikarohana hafa.
High Availability - a 99.99% SLA (fifanarahana eo amin'ny sehatry ny serivisy). Ny fidiran'ny angon-drakitra rehetra dia voatanisa ho azy amin'ny lozisialy telo samy hafa avo lenta.
Multi-datacenters - tazomy ny fotoana fohy amin'ny alàlan'ny fisafidianana datacenter akaiky ny mpampiasa anao.
Filaminan'ny kilasy voalohany - API ny lakile dia mametra ny fidirana amin'ny index manokana, ary mametra fetra toy ny tahan'ny fangatahana farafahakeliny ho an'ny adiresy IP, na ny fotoana farany famaranana.
Tags: algoliafikarohana anatinynginxmitady ho serivisySearch Marketing